Saron-tava azo ampiasaina, fampiasana fanafody Kn95mask, Facemask anti-vovoka - EISEN
EISEN INDUSTRY LIMITED (KUANGYE DONGGUAN TECHNOLOGY CO., LTD) dia miorina ao amin'ny Village Lianhu, Tangxia Town, Tanànan'i Dongguan miaraka amina fitaterana mety tsara, miaraka amin'ny velaran'ny fananganana mihoatra ny 5,000 metatra toradroa. Amin'izao fotoana izao, ny fitaovana mekanika an'ny orinasa dia ahitana: tsipika fivoriambe 10 mandeha ho azy, mihoatra ny 40 saron-tava ara-pitsaboana azo ampiasaina & KN95 FFP2 andalana famokarana mandeha ho azy, laboratoara elektrika iray manontolo, ary fananganana atrikasa tsy misy vovoka 100.000 an'ny antoko fahatelo, 10.000 laboratoara ara-pitsaboana -velle, sns. ekipa famokarana matanjaka sy ekipa mpiasa voaofana tsara.
Saron-tava Earloop tsy misy fitsaboana FFP3 NR avo lenta
Saron-tava tsy misy fitsaboana FFP2 NR avo lenta
Saron-tava 5 ply KN95 / FFP2 tsy saron-tava
Saron-tava 5 KN95 saron-tava tsy fitsaboana
Saron-tava miaro 3 Ply
Saron-tava medika azo ampiasaina 3 Ply
Mifandraisa aminay raha mila fanampiana bebe kokoa ianao
Azafady mba matokia ianao hisafidy anay, hanome anao vahaolana tonga lafatra izahay.
Ny orinasa dia nandalo ny ISO13485 & GMP mari-pahaizana momba ny kalitaon'ny rafitra fitsaboana, ary nahazo ny fahazoan-dàlana famokarana fitaovam-pitsaboana faharoa nasionaly, ary ny vokatr'izy ireo dia nandalo ny fanamarinana ireo andrimpanjakana matihanina ao an-trano sy any ivelany.
Andalana fivoriambe 10 mandeha ho azy, mihoatra ny 40 saron-tava ara-pitsaboana azo ampiasaina & tsipika famokarana mandeha ho azy KN95, laboratoara elektrika iray manontolo, ary fananganana atrikasa tsy misy vovoka 100 000 an'ny antoko fahatelo, laboratoara fitsaboana ambaratonga 10.000, sns.
Mpividy am-pitan-dranomasina maro no tena afa-po amin'ny vokatray. Niasa mafy izahay tamin'ny fanomezana vokatra sy serivisy avo lenta. Hanao ny anjara birikintsika manokana isika amin'ity vanim-potoana manokana ity. Azafady mba matokia ianao hisafidy anay, hanome anao vahaolana tonga lafatra izahay.
Mandra-pahoviana no maharitra ny sarontava? Ilaina ve ny manangona sarontava? Noho ny valanaretina pnemonia miandoha amin'ny satro-boninahitra, dia nitafy efa ho antsasaky ny taona ny sarontava.